Celceliska Guuritaanka Aan Heerka Ahayn Ee Ikhtiyaariyada Binary | vfxAlert official blog
Faaiido badan ayaa laga helayaa xulashooyinka?
Celceliska Dhaqdhaqaaqa waa mid ka mid ah aaladaha ugu cad cad ee sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah . Celceliska celceliska "classic" ayaa sii wadaya inuu macaash sameeyo, laakiin wax ka beddelka MA ayaa si weyn u horumarin kara natiijooyinka.
Ujeedada Celceliska Dhaqdhaqaaqa ayaa ah in la simo suuqa "sawaxanka" si loo muujiyo jihada dhabta ah ee isbeddelka. Iskucelceliska jaantuska laftiisa wuxuu u dhaqmaa sidii heer firfircoon oo taageero / iska caabin ah.
Celceliska ayaa loo jiheeyay kor, qiimaha ayaa ka sarreeya - kor u kac;
Hoos u dhac, qiimo hoose - hoos u dhac;
Dhaqdhaqaaqa Dhinacyada - suuqa waxaa ku jira isku dheelitirka awoodda iibsadayaasha / iibiyaasha (fidsan). Waxaan sugeynaa bilowga isbeddel cusub oo leh xaqiijinta barnaamijka ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah .
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Arnaud Legoux (ALMA)
Kuwa xiiseynaya algorithm-ka xisaabeed ee tilmaame, fiiri " Gaussian normal distribution ". Hadday ka fududdahay, Celceliska Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa waxaa la xisaabinayaa laba jeer - laga bilaabo bidix ilaa midig, ka dibna laga bilaabo midig ilaa bidix qiimaha hadda jira.
Faa'iidada : ugu badnaan "buuq" ka imanaya kicinta, saxitaanka iyo dib u celinta ayaa la tirtiray - waxaan fureynaa xulashooyinka kaliya sida ku cad "dhabta" isbeddelka iyo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ugu sarreeya .
Faa'iido darrada : dib u dhaca ayaa weli ku jira heerka "classic" MA.
Xusuusnow, adoo adeegsanaya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah: dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee ku xusan qodobka wuxuu siinayaa fursado wanaagsan calaamado ganacsi oo keliya isbeddellada .
Tilmaamayaasha istiraatiijiyadeed :
Laba ALMA oo leh mudo 20 iyo 30 ah . Isku darka caadiga ah ee "soon" (muddada 20) iyo "gaabis" (muddada 30) Celceliska Dhaqdhaqaaqa ayaa la isticmaalaa. Fur ikhtiyaarka shumaca soo socda ka dib markaad ka gudubto MA.
Heerka MACD (12, 26, 9) . Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa labadaba isbeddel ahaan iyo qalab oscillator ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee lagu furo ganacsi ku saabsan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah .
WAC (UP) - ikhtiyaar . "Fast" MA waxay u dhex martaa "Qunyar" hoosta ilaa sare. MACD waxay ka sarreysaa heerarka eber.
PUT (DOWN) - xulasho . Xaaladaha iska soo horjeedda: "Gaabis" MA ayaa u gudubta "Degdeg" ah kor ilaa hoos. MACD waxay ka hooseysaa heerarka eber.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Seddexaad ee Dhaqdhaqaaqa (Triple MA, TEMA)
Loogu talagalay in lagu fududeeyo is bedbedelka sicirka, taas oo u sahlaysa ganacsadaha binary otomaatiga ah inuu aqoonsado isbeddelka iyada oo aan dib u dhacu ku imaanayn celceliska dhaqdhaaqa dhaqameed (MA). Si tan loo sameeyo, TEMA waxay ka qaadataa dhowr celcelis celcelis ahaan dhaqaaq (EMA) asalka EMA ka dibna ka jaraya qaar ka mid ah dib u dhaca.
TEMA waxaa loo isticmaalaa sida kuwa kale ee MA. Waxay kaa caawin kartaa go'aaminta jihada dhaqdhaqaaqa sicirka, calaamadaha isbeddelka isbeddelka muddada-gaaban ama dib-u-dhigista, iyo bixinta taageero ama iska caabin.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Saddex-Geesoodka ah iyo Celceliska Dhaqdhaqaaqa Sahlan (SMA) oo leh muddo 20 . Sida istiraatiijiyaddii hore, waxaa jira laba Celcelis Dhaqdhaqaaq. SMA waxay noqon doontaa Celcelis "gaabis ah", kaas oo go'aamiya jihada isbeddelka muddada-dhexe. "Degdeg" Tripple MA waxay ka falcelisaa dib u soo celinta iyo sixitaanka ay calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u muuqdaan.
RSI oo leh mudo 14 iyo heer dheeri ah oo ah 70/30 . Tilmaamayaasha isbeddelka waa in si qasab ah lagu xaqiijiyaa ugu yaraan hal oscillator oo tilmaamaya xad dhaaf ah markii iibsadayaashu aysan mar dambe qiimaha kor u qaadi karin, ama dhaafin karin meesha aysan ku dhowaan karin qof ka mid ah suuqa oo ku iibinaya qiimo hoose.
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari bilaash ah :
WAC (UP) - ikhtiyaar . TEMA way ka sarreysaa Simple MA. RSI kor uga qaadista heerka sare ama heerka dhexe.
PUT (DOWN) - xulasho . Xaaladaha iska soo horjeedda: TEMA ayaa ka hooseysa Sahlan MA. RSI hoos uga soo deg qiimaha xad dhaafka ah ama heerka dhexe.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Hull (Hull MA, HMA)
Xitaa daahitaan kayar TEMA - Hull Moving Celceliska badiyaa wuxuu ka horreeyaa qiimaha celceliska caadiga ah, oo leh saxsanaanta sare ee ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa saadaalin kara isbeddelka isbeddelka ee ku dhaca 2-3 baararka.
Hull iyo Celceliska Dhaqdhaqaaqa Sahlan ee leh 20 . Dib u dhaca ugu yar ee celceliska Hull wuxuu u oggolaanayaa barnaamijka ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah inuu si sax ah u go'aamiyo daqiiqadda bilowga soo noqoshada ama hagaajinta, fur ikhtiyaarka bilowga dhaqdhaqaaqa. Ka ganacsiga ku-soo-celinta Hull MA waxaa kaliya loogu talagalay ganacsatada khibrada leh !
Stochastic - oscillator wuxuu qiimeyn doonaa isku dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha: saadaaliyaha ka sarreeya heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaafka ah), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca (kor loo qaaday).
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah :
WAC (UP) - ikhtiyaar . HULL MA wuxuu ka gudbayaa SMA xagga hoose ilaa kor. Stochastic waxay ka soo baxeysaa aagga kormeerka (heerka 20).
PUT (DOWN) - xulasho . Xaaladaha iska soo horjeedda: HMA wuxuu ka gudbaa SMA kor ilaa hoos. Stochastic hoos uga soo dhaca aagga lagu iibsaday (heerka 80).
Xitaa waqtiga daqiiqadaha, Stochastic iyo RSI marar dhif ah ayey galaan aagagga xad-dhaafka ah waxaadna seegi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii qiimaha iyo oscillator ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal dhinac - waad furi kartaa heshiis. Ma jiro 60 ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah !
Soo Koobid verage Celceliska Dhaqdhaqaaqa Beddelay wuxuu muujinayaa natiijooyin wanaagsan, labadaba ganacsiga gacanta iyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah . Isku dar iyaga "caadiga ah" MA, eeg xaqiijinta dheeraadka ah ee oscillators, tilmaamayaasha mugga oo hel faa'iido deggan.